ဢုပ်ႇၵုမ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း:Ninjastrikers - ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး
1 ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ Ninjastrikers !
2 PLEASE BLOCK MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
4 Hello Ninjastrikers
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ Ninjastrikers !
အကိုရေ ဒီတမ်းပလိတ်လေး လုပ်ထားလိုက်တယ်။ လိုအပ်တဲ့ စာမျက်နှာလေး ထပ်ဆောက်သွားပါဦးမယ်ခင်ဗျ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Saimawnkham (talk) 01:02, 20 ၼူဝ်ႇ​ဝႅမ်ႇ​ပႃႇ 2018 (UTC)
@Saimawnkham: ဟုတ်ကဲ့အကို။ လိုတာရှိရင် ပြောပါဗျ။ Ninjastrikers (talk) 04:48, 20 ၼူဝ်ႇ​ဝႅမ်ႇ​ပႃႇ 2018 (UTC)
PLEASE BLOCK MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEထတ်း
I DDDDIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD VANDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Hi 저 관리자 신청 했어요. Ykopwer (talk) 04:01, 29 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2020 (UTC)
Hello Ninjastrikers, how are you? Sorry in English. I'm the editor of Chinese Wikipedia. I wrote an article Mong Mao (မိူင်းမၢဝ်းလူင်) in Chinese Wikipedia. And I want to know how the "Mong Mao" write-in Shan language? I think မိူင်းမၢဝ်းလူင် is Mong-Mao-Long, so is မိူင်းမၢဝ် correct for Mong Mao?--瑞丽江的河水 (talk) 01:03, 23 ၵျုၼ်ႇ 2020 (UTC)
Last edited on 23 ၵျုၼ်ႇ 2020, at 01:03
ၼႃႈ​လိၵ်ႈၼႆ့ မႄးမႃး​ဝႆႉ ၼင်ႇ​ၵမ်း​လိုၼ်း​သုတ်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်း​တီႈ 23 ၵျုၼ်ႇ 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 01:03